Ndiani Ari Kupindura Ongororo Yako? Kugutsikana Kwakaitwa Nyore | Martech Zone
Kukumbira mhinduro yevatengi kare, panguva, uye mushure mekutanga bhizinesi nyowani inzira yakanaka yekuziva kuti uri kuyera sei mumaziso evatengi vako. Haumbofi wakada kufungidzira kuti unoziva marongero ako ekushambadzira (vanaamai vane makore makumi matatu kusvika makumi mashanu ekuberekwa, semuenzaniso) vanonzwa nezve zvauri kuita, kunyanya sezvo zviri nyore kuzvibvunza iwe pachako. Nhau dzakanaka dzevatengesi, ungave uri kushanda kukambani hombe kana kutanga kudiki, ndeyekuti kune akati wandei maturusi aripo ekukubatsira iwe nebasa rekusvika pakuongorora yako yakanangwa musika, zvisinei yako bhajeti kana danho yehunyanzvi.
Tumira an online ongororo kuti udzidze zvakawanda nezvevatengi vako, kuti vanonzwa sei nezvezvinhu zvako zvitsva, zvavanoda kuona kubva kwauri mune ramangwana, uye kuti ndeupi rudzi rwekutumira mameseji unonyanya kuvakanganisa. Iwe une sarudzo yekuongorora vatengi vako zvakananga, kana iwe unogona kuenda kuburikidza neyechitatu bato repaneru kambani kuti utenge iwo maonero eako tarisiro vakapindura. PaSurveyMonkey, tinopa SurveyMonkey Vateereri kuti ndikubatanidze iwe nevatengi nevatori vechikamu iwe waungade zvakanyanya kusvika.
Asi ko kana wako akapindura ongororo, uyo anoti ane makore makumi matatu nemashanu ekuMexico American anoshanda muindasitiri yehutano uye ane vana vaviri, ari muchena wemakore gumi nemasere muchena, ari kunze kwebasa makanika anonzi Frank? Sarudzo dzaunoita iwe nemhedzisiro yeako kugutsikana kwevatengi ongororo dzinovimbika chete neruzivo iwe rwauinaro nezvevanhu vari kutora ongororo yako.
At SurveyMonkey, isu tine zvikwata zvese zvinoshanda kuti tione nzira dzakanakisa dzekusimbisa kuzivikanwa kwevanoongorora mapaneru. Iyo YechokwadiSampuli timu iri kushanda RealCheck Postal uye RealCheck Yemagariro, mhinduro dzinoongorora kuzivikanwa kwevakabvunzurudzwa nevanhu kuburikidza nezita ravo nekero nekero yeemail, zvichiteerana. Iyi nzira ine maoko maviri yekuongorora anopindura kugoneswa inoitirwa kusimbisa kuzivikanwa kwekuti kunyange zvakaoma kusimbisa vakapindura, sevane makore gumi nemasere kusvika makumi maviri nemana (sorry Frank).
Isu zvakare tine Dr. Phil nechikwata chake che ongororo nzira vari kushanda kuti vaone avo vanogutsa vanogutsa, vanhu vanomhanyisa kuburikidza neyako ongororo vasina kuipa nguva nekutarisisa kwakakodzera. Maitiro aPhil Phil anovimba nawo Bayesian inference, iyo nzira inoratidza zvine musoro zvisina kuteedzerana (anopindura achizviratidza semurume, semuenzaniso, uyezve mune mumwe mubvunzo unotevera achipindura "hongu," anga aine nhumbu mumakore matatu apfuura).
Kugonesa kuzivikanwa kwevakabvunzurudzwa hunyanzvi uye sainzi, asi chinofadza ndechekuti hausi wega mukutsvaga kwako kwevakanyanya kupindurwa nevanoongorora. Kune vamwe vanhu vakangwara kwazvo vanokanda uye kutendeuka husiku, vasingakwanise kurara vachifunga nezvenzira yakanakisa yekusimbisa vapindura vako. Kunyanya. Nekuti zvirinani, zvakagadziriswa kuongororwa kwevanopindura zvinoreva zvimwe zvakavimbika mhedzisiro. Mimwe yakavimbika mitsva yekuongorora inoreva sarudzo dziri nani zvichibva pane izvo zvabuda Uye kuita zvirinani kuita sarudzo kunoita kuti utaridzike, izvo zvinoita kuti tifare. Wese munhu anokunda. Kunze kwaFrank.
Tags: RealCheck KeroRealCheck Zvemagariromuongorori anopinduraSurveyMonkeyTrueSamplekutsigira
Kukadzi 19, 2016 na12:37 PM
Mhoro Hana, pane here zviverengero zviripo zvinosimbisa ongororo dzeSurveyMonkey kuve dzakavimbika uye dziri kushanda? Ndinoda kuishandisa sechirongwa chekutsvagisa uye ndinofanira kuratidza chokwadi uye kuvimbika.